Gabar Sheegatay In Xiddiga UFC Conor McGregor Uu Canug Ka Dhalay Ayna Dooneyso Baaritaan DNA Ah & McGregor Oo Ka Jawaabay - Latest football news
Gabar Sheegatay In Xiddiga UFC Conor McGregor Uu Canug Ka Dhalay Ayna Dooneyso Baaritaan DNA Ah & McGregor Oo Ka Jawaabay
Garab ayaa sheegatay in xiddiga ciyaarta dagaalka ee UFC Conor McGregor inuu dhalay gabadheeda waxaana ay dooneysaa in dagaalyahanka laga qaado dheecaanka hido sidaha ee DNA.
Gabadhan oo lagu magacaabo Terri Murray oo 26 sanno jir ah ayaa sheegtay inay gabadha dhashay sagaal bilood ka dib markii ay isla seexdeen xiddiga UFC kaasoo la sheego inay hantidiisu gaareyso 75 milyan ginni.
Waxay tiri: “Ma doonayo lacagtiisa, waxaan kaliya doonayaa inaan cadeeyo inuu aabo u yahay gabadheyda Clodagh, beena ma sheegayo”
Laakiin xiddigaan oo suunka UFC ku guuleystay labo jeer laguna naaneeso “Notorious”, ayaa beeniyay inuu yahay aabaha gabadha yar, waxaana uu sheegay in Terri Murray ay la seexatay mid ka mid ah asxaabtiisa.
Waxaa la fahamsan yahay in McGregor uu diyaar u yahay inuu laga qaado DNA si ay arinta u kala cadaato.
Terri iyo McGregor ayaa kulmay markii uu u safrayay Liverpool sannadii 2017.
Terri ayaa waxa ay tustay Daily Mirror fariimo uu McGregor ugu soo diray baraha bulshada uu ku beeninayo inuu yahay aabaha Clodagh, waxaana uu jeediyay in aabaha uu noqon karo mid ka mid ah asxaabtiisa.
Waxay tiri: “Waxaan weli ku fekerayaa inaanan arintaan sameynin, waa mid qalad ah, laakiin waxaan la noolahay hooyadeey, ma shaqeeyo waxaana heystaa gabar yar. Waan dhibtoonayaa, xaaladuna waa ay ka adag tahay sidaasi filayay.
“Ma dooneynin inaan sidaan sameeyo. Waan jeclaan lahaa inaan si qarsoodi ah u xalino wax walba, laakiin isagaa igu qasbay inaan banaanka soo dhigo.”
Qof isaan is hubini ma Dalbado dhiiga hido sidaha naagtan Arinkeedu run buu u dhow yahay hadii kale sidii nimco yaasin bay diidi lahayd in dhiiga la qaado waanay ogtahay hadii dhiig la qaado waa la kala baxayaa qof is huba ayuun baa kaas dalbada